Codsiyada ugu wanaagsan ee Android ee lagu baaro dukumiintiyada | Androidsis
Telefoonkeena Android wuxuu noo ogolaanayaa inaan fulino dhamaan noocyada ficilada. Intaa waxaa dheer, mahadsanid rakibaadda codsiyada waxaan wax badan ka qaban karnaa taleefanka. Mid ka mid ah waxyaabaha aan sameyn karno ayaa ah iskaanka dukumiintiyada. Ficil aan u baahanahay inaan ku qabanno mararka qaarkood oo aan ugu mahadcelino taleefankeena si weyn ayaa loo fududeyn karaa.
Si fudud ugu rakib codsi qalabka si aad awood ugu yeelatid inaad dukumiintiyada iskaan ku sameysid. Laakiin hadda waxaan haysannaa waxoogaa codsiyo ah oo Android ah oo noo oggolaanaya inaan iskaanno dukumiintiyada. Waxaan kaaga tagaynaa kuwa ugu fiican ee hoose. Dhammaantood si fudud ayaa loogala soo bixi karaa si toos ah Play Store.
Codsiyadaani waa xulasho ka mid ah kuwa badan ee la heli karo. Laakiin waxaan raadineynay kuwa ku siin doona waxqabad wanaagsan, marka lagu daro inay fududahay isticmaalkiisu adeegsadaha. Maaddaama tani ay tahay qodob muhiimad weyn leh waqti kasta. Diyaar ma u tahay inaad wax ka barato barnaamijyadan?
4 Xafiiska Lens
Waxaan ku bilaabaynaa waxa dad badani u arkaan inay yihiin dalabka ugu fiican arimahan. Waa codsi u muuqda naqshadiisamaadaama ay aad ufududeyso dadka isticmaala inay iskaan dukumiintiyada. Runtii waa wax aad u raaxo badan oo dareen leh. Marka wax dhibaato ah kala kulmi meysid isticmaalkiisa. Sidoo kale, uma baahnin inaan helno xisaab aan ku adeegsanno barnaamijka. Waxa inala gudboon waa inaan diirada saarno kaamerada dukumintiga su'aasha laga hadlayo oo aan sawir ka qaadno Waxaan fursad u leenahay inaan wax ka bedelno dukumintigan hoos ku qoran, aadna ugu habboon haddii uu dhowr bog leeyahay oo aan u keydin doonno sidii PDF. Qaab aad u raaxo badan markaad shaqeyneyso.
Soo degsashada arjigan si aad dukumiintiyada ugu raadiso Android waa bilaash. In kasta oo aan ka dhex helno wax iibsi iyo xayeysiis.
CamScanner PDF Scanner, Dokument Scanner
Developer: Macluumaadka CamSoft
Marka labaad, waxaan helnaa codsi kale oo inteena badani hubto. Waa codsi doonaya inuu naga caawiyo sidii aan wax walba ugu habayn lahayn hab raaxo leh oo noo fudud. Maxaa intaa ka badan, waxaan sidoo kale leenahay howsha baarista dukumiintiyada, taas oo aan markaa ku xiri karno qoraal haddii aan rabno. Shaqada lafteedu waa mid aad u fudud in la isticmaalo waxaana ku sameyn karnaa skaanis ilbiriqsiyo gudahood. In kasta oo ay xaaladdan tahay, tayada sawirka ayaa laga yaabaa inuu ka sii xumaado haddii qalad lagu sameeyo, maaddaama aan u baahanahay isbarbardhig badan. Laakiin guud ahaan waa codsi si fudud loo isticmaalo oo na siinaya awood aan ku baarno sawirrada ama dukumiintiyada iyada oo aan wax dhibaato ah.
U soo degsashada codsigan loogu talagalay Android waa bilaash. In kasta oo aan ka helno wax iibsi gudaha ah.
Marka saddexaad waxaan haysannaa mid kale oo ka mid ah xulashooyinka ugu fiican ee la yaqaan iyo mid ka mid ah kuwa ugu fiican ee jira waxaa loogu talagalay Android. Waa in la sheegaa in dhammaan codsiyada Adobe ay u taagan yihiin tayadooda, wax waliba ku dhaca kan. Hawlgalka dalabku waa mid fudud, waa inaan iskaanka u isticmaalnaa kamaradda qalabka. Ilbidhiqsiyo gudahood markaan dhamayno, dukumenti ayaa lagu soo saari doonaa qaabka PDF. Intaa waxaa dheer, waxay na siinaysaa suurtagalnimada tafatir dukumintiga la yiri markasta. Marka waa ikhtiyaar aad u raaxo badan oo dhameystiran in la tixgeliyo.
U soo degsashada codsigan loogu talagalay Android waa bilaash. Intaas waxaa sii dheer, kuma haysano wax iibsi ama xayeysiin gudaheeda.
Waxaan ku dhammeynay codsigan kale, taas oo kiiskan ka socota Microsoft. Marka waxaan sidoo kale leenahay dammaanad ah inay si fiican u shaqeyn doonto. Waa ikhtiyaar u taagan markale helitaanka a naqshad aad u fudud oo raaxo leh dadka isticmaala, maadaama ay na xasuusinayso barnaamijyada ama codsiyada shirkadda. Marka wax walba waa la yaqaan, taas oo ka dhigaysa mid si weyn loogu taliyay. Waxay u shaqeysaa si aad u wanaagsan markii la baarayo dukumiintiyada waxayna na siineysaa natiijo wanaagsan tayada tayada muuqaalka. Waxaan sidoo kale tafatiri karnaa dukumintiga laftiisa.
U soo degsashada codsigan loogu talagalay Android waa bilaash. Sidoo kale, ma jiraan wax wax iibsi ama xayeysiin ah oo dhexdeeda ah.
Lens Microsoft - Scanner PDF
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Barnaamijyada Android si ay u baaraan dukumiintiyada